Ugqoka kanjani umbhede ebusika | Hlobisa
Ugqoka kanjani umbhede ebusika
UMaria Jose Roldan | 19/10/2021 12:03 | Amakamelo okulala
Kujwayelekile ukuthi ngokufika kwamakhaza, umhlobiso wendlu ushintsha ngokuphelele, ngenhloso yokuthola ikhaya elifudumele nelamukelekayo kunezinyanga zasehlobo. Umbhede ungenye yezindawo endlini okufanele ushintshe ngokuphelele ukuze uthole ukuphumula okuphelele futhi uzizwe ukhululekile ngangokunokwenzeka kuwo, ngaphandle kokuzwa ukubanda nhlobo.
Esihlokweni esilandelayo sikunikeza uchungechunge lwemihlahlandlela noma amathiphu azokuvumela ukuthi ugqoke umbhede wakho ebusika obude futhi ngena ngale ndlela indawo lapho ungaphumula khona futhi ulale kamnandi.
Ugqoka kanjani umbhede wakho ebusika
Akukho lutho olumnandi kulokhu kuphila, njengokwazi ukulala embhedeni omuhle ukukusiza ulwe namazinga okushisa aphansi ajwayelekile ezinyangeni zasebusika. Okulandelayo, sikunikeza uchungechunge lwamathiphu azokusiza ukugqoka umbhede wakho ebusika futhi ungatholi lutho olubandayo ngaphakathi kwawo:
Isicucu sikamatilasi singenye yezinto ezibalulekile lapho ugqoka umbhede wakho phakathi nezinyanga ezibandayo. Lesi sikhala sikamatilasi kumele sibe sanele ngokwanele ukulwa namazinga okushisa aphansi ebusika. Impahla engcono kakhulu yokwakhiwa kukamatilasi ngokungangabazeki iwulu, ngoba iyasiza ukuvikela umatilasi futhi iyisivikelo esihle emakhazeni.
Enye into ezokusiza ukuthi ube nombhede ofudumele phakathi nezinyanga zasebusika amashidi. Izinto ezihamba phambili kubo ukotini. Amashidi kufanele abe mkhulu ukuletha ukushisa ngaphakathi kombhede futhi agweme ukubanda ngaphakathi kwawo. Okuhle ngamashidi kakotini ukuthi yize ubukhulu bawo, ephefumula kahle. Ngokuphambene nalokho, amashidi wezinto zokwenziwa aweluleki nhlobo ngoba awajuluki nakancane futhi azihlinzeki ngemfudumalo yokuthi umbhede udinga indawo ethokomele futhi efudumele.
Enye into ebalulekile lapho ugqoka umbhede wakho ebusika yi-duvet. I-quilt ethi kufanele yenziwe ngezimpaphe, ngoba kuyinto enhle kakhulu uma kukhulunywa ngokuthola umbhede ofudumele futhi othokomele. Into enhle mayelana ne-duvet eshiwo ukuthi iletha ukushisa okuningi ngaphandle kokukhulu kakhulu. Enye indlela enhle umugqa ogcwala imicu yemvelo, inqobo nje uma ungabandi kakhulu ngaphandle futhi usezindaweni lapho ubusika bungabibi kakhulu khona.
Uma kukhulunywa ngokugqoka umbhede wakho phakathi nobusika, awukwazi ukuphuthelwa ngengubo yoboya obuhle. Yize kuphelele ukwengeza embhedeni, Ingubo yoboya eboshwe ingasetshenziswa kwezinye izindawo endlini njengasofeni. Iqiniso ukuthi uhlobo lwendwangu luphelele uma kukhulunywa ngokulwa namazinga okushisa aphansi ajwayelekile ebusika. Zilula futhi zithambile ekubunjweni futhi zinikeza imfudumalo edingeka kakhulu ezinyangeni zasebusika.
Eminyakeni yamuva nje, lokho okubizwa ngokuthi izingubo zokulala zoboya sekuyimfashini kakhulu.. Zithambile kakhulu futhi zilula ukwedlula izingubo zokulala ezithungiwe futhi zinikeza ukuthinta okuthakazelisa okuthokozisa ekamelweni. Izinto zalolu hlobo lwengubo zilungile uma kukhulunywa ngokuthola imfudumalo eyanele embhedeni nokuvimbela umuntu ukuthi angabandi. Okufanelekile ukuwabeka ezinyaweni zombhede ukuthola umhlobiso omuhle wombhede.
Iphuzu lokugcina elizogqanyiswa lapho ugqoka umbhede phakathi nezinyanga zasebusika ukukhetha umbala wezindwangu ezahlukahlukene. Njengokujwayelekile, kungcono ukukhetha amathoni afudumele ahlukile akuvumela ukuthi wakhe isikhala esithokomele esibhekana namazinga okushisa aphansi ngaphandle. Ngale ndlela kunconywa ukuthi ukhethe imibala njengomhlaba, ophuzi noma onsundu lapho ugqokelwa ukulala. Ngokuqondene nezinto zokwakha, i-flannel noma uboya abukwazi ukulahleka. Ukuhlanganiswa kwamathoni afudumele nalolu hlobo lwezinto zokusebenza kuhle futhi kuyisisekelo sokwenza igumbi lokulala libe yindawo endlini ekumema ukuba uphumule futhi ithokomele ngokuphelele.
Ngamafuphi, kubalulekile ukwazi ukuthi ugqokiswa kanjani umbhede phakathi nezinyanga zasebusika ngoba kuncike kuwo, ukungabandi nhlobo nokukwazi ukuphumula ngendlela ethukile. Namuhla kunezinhlobonhlobo eziningi uma kukhulunywa ngezindwangu nezesekeli okufanele zigqokise umbhede ebusika. Okubalulekile ukwenza umbhede ube yindawo ethokomele futhi efudumele evumela ukuthi uphumule kahle yize amazinga okushisa aphansi ejwayelekile ezinyangeni zasebusika.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izikhala » Amakamelo okulala » Ugqoka kanjani umbhede ebusika
Izihluthulelo zokuhlobisa amathala amancane
Ungayihlela kanjani ikhishi elincane